28th October 2019 – Myanmar Hot News
သူမရဲ့လှပသေသပ်လှပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကြောင့် ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ပုံစံလေးကိုလဲတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဆွဲ‌ဆောင်မှုရှိပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်လေးအဖြစ် အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ကြယ်ပွင့်တစ်ပွင့်‌အနေနဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။ မိန်းကလေးလေးအချင်းချင်းတောင်သဘောကျနှစ်သက်ရတဲ့ အနုပညာရှင်လေးဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးနှစ်သက်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားပြီး အနုပညာလောကထဲကိုစတင်ရောက်ခဲ့စဉ်က ဗီလိန်အနေအထားနေရာသဘောကနေသရုပ်‌သရုပ်ဆောင်အားဖြည့် ခဲ့ရသော်လည်း သူမရဲ့ပင်ကိုယ် သရုပ်ဆောင်ပီပြင်ခဲ့တာကြောင့် ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်ကိုတောင်မေ့ဖျောက်စေခဲ့ပြီး အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ သူမရဲ့ယနေ့ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေကတော့မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်စုံလေးနဲ့တကယ်ကို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ မြန်မာမလေးအသွင်အပြင်နဲ့တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလွန်လှပတဲ့ အဖြူအင်္ကျီလေးနဲ့ချိတ်ထမီလေးကိုဝတ်ဆင်ထားတာကတော့ မြင်သူတိုင်းငေးမောရလောက်တဲ့ အလှအပတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Photo Source; Wint Yamone Naing ‌
Posted on 28th October 2019 28th October 2019 Author lkadmin Comment(0)
အမိုက်​စား ပုံရိပ်​​လေး​တွေနဲ့ ​နှုတ်​ခမ်းနီမ​လေး​တွေကို ​မေးခွန်းထုတ်​လိုက်​တဲ့ ​ကောင်း​မြတ်​စံ
Forever Groupရဲ့မင်းသား​ချော​လေးတစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ ​ကောင်းမြတ်​စံဟာဆိုရင်​ ပရိတ်​အခိုက်​အမာ အား​ပေးကြတဲ့ မင်းသားတစ်​လက်​ပါ။ပါးချိုင့်​​လေးနဲ့ စွ​ဆောင်​မှုရှိတဲ့ ပုံစံ​လေး​ကြောင့်​ မိန်းက​လေးပရိတ်​သတ်​​တွေရဲ့ အား​ပေးမှုကို ပိုမိုရရှိထားတဲ့ မင်းသားတစ်​လက်​ပါ။ လက်​ရှိမှာ​တော့ သူပါဝင်​ရိုက်​ကူးထားတဲ့ ​ပျောက်​ဆုံး​နေ​သော အမှန်​တရားဇာတ်​လမ်းတွကြီးဟာ ပရိတ်​သတ်​​တွေ စိတ်​၀င်​စားမှု အခိုင်​အမာရရှိထားတဲ့ ဇာတ်​လမ်းတွဲကြီးပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ​ယခုမှာ​တော့ ​ကောင်းမြတ်​စံဟာ သူရဲ့ မိန်းက​လေးပရိတ်​သတ်​​တွေကို ​မေးခွန်း​လေးတစ်​ခု​မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်​။ထို​မေးခွန်းကို​တော့ သူရဲ့လူမှုကွန်​ရက်​မှာ”မင်းလေးတို့ အချစ်က ကိုယ့်အတွက်ရော ဟုတ်ရဲ့လား?????”ဆိုပြီး သူရဲ့ အမိုက်​စားပုံ​လေး​တွေနဲ့တကွ ​မေးမြန်းခဲ့တာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ကဲပရိတ်​သတ်​ကြီးတို့ရဲ့ အချစ်​​တွေ​ရော ​ကောင်းမြတ်​စံ​ အတွက်​ဟုတ်​ရဲ့လား။ Wunna’ Source, Kaung Myat San’fb
ရှင်စောဖြူထိပ်ထားလေးအနေနဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ဟန်ပန်‌တွေနဲ့တွေ့မြင်ရအုန်းမယ့် စိုးပြည့်သဇင်
အနုပညာကြယ်ပွင့်ထဲမှာမှ ချစ်စရာကောင်းပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးနှစ်သက်မှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ သူမကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာတမူးထူးခြားတဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေနဲ့ အမြင်မတူမှုတွေကို ပရိသတ်တွေကို ထပ်ဆင့်ချပြအုန်းမယ့်သူလေးကတော့စိုးပြည့်သဇင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့တွေ့မြင်ရမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ သုံးပန်လှကျိန်စာဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာတွေ့မြင်ခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုကားကြီးထဲမှာတော့ ရှင်စောဖြူထိပ်ထား ရဲ့ဇာတ်ကောင်နေရာ‌ကနေ ကြိုးစားထားတာ‌မို့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဘယ်လိုများထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာ မျှော်လင့်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့တမူထူးခြားလှတဲ့ အပြုအမူဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေကြောင့် အမြင်မတူတဲ့ အသွင်အပြင်မျိုးနဲ့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ထူးခြားနေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Photo Source ; Soe Pyae Thazin
Forever Groupရဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး ပိုးကြာဖြူခင်​ဟာဆိုရင်​ ချိုသာတဲ့အပြုံး​လေးနဲ့ ပရိတ်​သတ်​​တွေ အချစ်​ကို ရယူနိုင်​သူ​လေးပါ။ မိုး​ကောင်းကင်​ အိပ်​မက်​ဇာတ်​လမ်းတွဲမှ ဆိုင်းမိုင်​ဇာတ်​​ကောင်​နဲ့ ပရိတ်​သတ်​​တွေရဲ့ တစ်​ခဲနက်​အား​ပေးမှုကိုရရှိခဲ့သူပါ။အနုပညာလှုပ်​ရှားမှု​တွေ ဆက်​လက်​လုပ်​ကိုင်းလျက်​ရှိပြီး ​ပွဲအခမ်းအနား​တွေလည်း တက်​​ရောက်​လျက်​ရှိပါတယ်​။ ယခုမှာ​တော့ မိတ်​ကပ်​မလိမ်းပဲ သူမရဲ့သဘာဝအတိုင်းအလှတရား​တွေကို”မိတ်ကပ်မလိမ်းတဲ့နေ့ 😎”ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်​ရက်​မှာ မျှ​ဝေ​ပေးခဲ့ပါတယ်​။ပရိတ်​ကြီးကို ဆိုင်းမိုင်​​လေးရဲ့ သဘာဝအတိုင်းလှ​နေတဲ့ ပုံ​လေး​တွေ ​​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။ Wunna’ Source,Poe Kyar Phyu Khin
ဆံပင်​အရှည်​​လေးနဲ့ ​ယောက်ျားပီသတဲ့ ရုပ်​ရည်​တို့ကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ ​မော်​ဒယ်​မင်းသားပိုင်​တံခွန်​ဟာ ဆိုရင်​မြန်​မာပြည်​မှာသာမက ထိုင်းနိုင်​ငံမှာပါ ပရိတ်​သတ်​အခိုင်​အမာ ရရှိထားသူတစ်​​ယောက်​ပါ။​မော်​ဒယ်​​လောကကိုစတင်​၀င်​​ရောက်​စက ပရိတ်​သတ်​သတိမထားမိ​ပေမယ့်​ ဆံပင်​အရှည်​ထားပြီး​နောက်​ပိုင်းမှာ မိန်းက​လေးပရိတ်​သတ်​​တွေရဲ့ တစ်​ခဲနက်​၀န်းရံမှုကို ရရှိခဲ့သူပါ။ လက်​ရှိမှာ​တော့ အနုပညာလှုပ်​ရှားမှု​တွေ ဆက်​တိုက်​ပြုလုပ်​လျက်​ရှိပြီး ​ကြော်​ငြာ​တွေများစွာကိုလည်း ရိုက်​ကူးခဲ့ပြီးဖြစ်​ပါတယ်​။ ယခုမှာ​တော့ မိန်​က​လေးပရိတ်​သတ်​​တွေ ​ကြွေသွား​စေမယ့်​ ညှို့အားပြင်းလှတဲ့ ဓာတ်​ပုံ​လေး​တွေနဲ့ ဖမ်းစားလိုက်​ပြန်​ပါတယ်​။ကဲ ပရိတ်​သတ်​ကြီးအတွက်​ ပိုင်​တံခွန်​ရဲ့ အမိုက်​စားပုံ​လေး​တွေပြန်​လည်​မျှ​ဝေ​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။ Wunna’ Source,Paing Takhon’fb
လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကြောင့် မြင်သူငေးရလောက်အောင် လှပလွန်းနေတဲ့ သန္တာဗိုလ်လေးကတော့ အခုအခါမှာ D-POP အချိုရေကြော်ငြာလေးမှာ အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းလေးမှာတော့ သူမရဲ့ အလှများနဲ့ အရာအားလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ သူမရဲ့ အနုပညာလျှောက်လှမ်းမှုတွေကတော့ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့ လျှောက်လှမ်းလာတာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေကလဲရရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ကတော့ သူမရဲ့လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံလေးကို ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပြီး မြင်သူတိုင်းငေးမောနေရတဲ့ သူလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ အစိမ်းရောင်ဂါဝန်လေးနဲ့ကတော့ သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုပိုမိုပေါ်လွှင်စေပြီး အလှတရားများကို ဖုန်းကွယ်ထားခြင်းမရှိဘဲ တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ လှပတဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဖို့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Photo Source; Thandar Bo
မိန်းကလေးတစ်ယောက်လို အမြဲလှပနေပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် မျိုးကိုကိုစန်းဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ LGBT လောကမှာ အအောင်မြင်ဆုံး လူကြိုက်အများဆုံး ချစ်စရာအကောင်းဆုံးသူမက အနုပညာလောကထဲမှာလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အောင်မြင်နေပြီပဖြစ်​ပါတယ်​။ မျိုးကိုကိုစန်းက မိန်းကလေး အရမ်းဆန်တဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကိုပဲ တင်လေ့ရှိတဲ့ သူမက ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိန်းကလေးစစ်စစ်တွေ အရှုံးပေးရလောက်အောင် လှတဲ့ ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာပါ။ မျိုးကိုကိုစန်းက ” အနီရောင်ဝတ်ထားပေမဲ့ မောင့်အသည်းကို မခွဲပါဘူးနော်” ခုလိုပြောထားပါသေးတယ်။မျိုးကိုကိုစန်း ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ဆက်လက်ကြည့်ရူပေးကြပါဦးနော်။ Wunna’ Source, Myo Ko Ko San’fb
တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ အလှတရားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တဲ့ ချောရတနာ
တစ်ခေတ်တခါက အနုပညာလောကရဲ့ ကြယ့်ပွင့် အခုအခါမှာတော့ သာယာလှပတဲ့ မိသာစုလေးရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်လေး သူမကတော့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ နည်းနည်း အလှမ်းဝေတယ်ဆိုပေမယ့်လဲ သူမရဲ့ လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလေးကိုတော့ အလှမပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ သူမကတေ့ာ ချောရတနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့မိသားစုလေးကို အလေးထားပြီး သားနဲ့သမီးလေးကို အသည်းတုန်နေအောင် ချစ်တဲ့ မေမေဖြစ်တာကြောင့် အမှတ်တရအနေနဲ့လဲ သူမရဲ့ ဂုတ်မှာ တက်တူးထိုးထားတာပဲဖြစ်တာကြောင့် အလှတရားမပျက်ဘဲ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့ အလှတရားမှားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှ ကြောင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် တွေမြင်ရမှာဖြစ်ပြီး အယုံနိုင်လောက်အောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုး အစားကတော့ မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် လှပနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။တည်ငြိမ်အေးချမ်းလှပြီး အလှတရားအစစ်တွေကိုတော့ သူမရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေမှာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Photo Source ; Chaw Yadanar
Myanmar Idol က​တော့ သီချင်းဆိုပြိုင်​ပွဲ​တွေထဲမှာ ပရိတ်​သတ်​စိတ်​၀င်​စားမှုအများဆုံးပြိုင်​ပွဲ လို့​ပြောလို့ရပါတယ်​။နှစ်​တိုင်းပရိတ်​သတ်​အား​ပေးမှု တစ်​ခဲနက်​ရရှိခဲ့ပြီး အဆိုရှင်​​ကောက်းများစွာကို ​မွေးထုတ်​​ပေးခဲ့တဲ့ ပြိုင်​ပွဲတစ်​ခုဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီနှစ်​မှာ​တော့ ဒိုင်​လူကြီး​တွေအဖြစ်​ ​အောင်​ကိုလတ်​၊တင်​ဇာ​မော်​၊ဖြူဖြူ​ကျော်​သိန်းတို့က Top10 Finalistကို​ရွေးချယ်​​ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်​ပါတယ်​​။Myanmar Idolရဲ့ပင်​တိုင်​ Host အဖြစ်​​တော့ ​ကျော်​ထက်​​အောင်​ဟာ မပါမဖြစ်​ ​တွေ့မြင်​​နေကျဖြစ်​ပါတယ်​။ လက်​ရှိမှာ​တော့ ​ကျော်​ထက်​​အောင်​ဟာ Myanmar Idolမှ တာဝန်​ရှိသူ​တွေနဲ့ selfieရိုက်​ခဲ့ပြီး ထိုပုံ​တွေကို”Myanmar Idol season4Selfie Night!!! But လူမစုံ …. 😊”ဆိုပြ်ိး သူရဲ့လူမှုကွန်​ရက်​မှာ ​ဖော်​ပြ​ပေးခဲ့ပါတယ်​။ပရိတ်​သတ်​ပြီးအတွက်​ ​ကျော်​ထက်​​အောင်​ရဲ့ selfieပုံ​လေး​တွေကို ပြန်​လည်​မျှ​ဝေ​ပေးလိုက်​ရပါတယ်​။ Wunna’ Source, Kyaw Htet Aung
ပရိတ်​သတ်​ အချစ်​​တော်​​အေး​သောင်းဟာဆိုရင်​ ​ယောက်ျား​လေးပရိတ်​သတ်​ အများဆုံး ၀န်းရံအား​ပေးခံရတဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး တစ်​လက်​ပါ။ဆယ်​​ကျော်​သက်​အရွယ်​ကတည်းက အနုပညာ​လောကကို စတင်​၀င်​​ရောက်​ခဲ့ပြီး ပရိတ်​သတ်​ချစ်​တဲ့ အပြုံး​လေး​တွေနဲ့ ယ​နေ့ထိတိုင်​ ​အောင်​မြင်​တဲ့ မင်းသမီးတစ်​​ယောက်​အဖြစ်​ ရပ်​တည်​​နေခဲ့တာပဲဖြစ်​တယ်​။ ​အေး​သောင်းဟာ လက်​ရှိမှာ အနုပညာလှုပ်​ရှားမှု​တွေ ဆက်​တိုက်​ပြုလုပ်​​နေပါတယ်​။လွတ်​လွတ်​လပ်​လပ်​နဲ့ တစ်​​ယောက်​တည်း အပျိုကြီးဘ၀နဲ့ ဖြတ်​သန်း​နေပြီး ပရိတ်​သတ်​​တွေ ၀န်းရံမှုရရှိ​နေတဲ့ မင်းသမီး တစ်​လက်​ပါ။ လက်​ရှိမှာ​တော့ မင်းသမီးချစ်​စနိုးဦးနဲ့ အဆို​တော်​ ဖိုးသားတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ သတို့သမီးအရံအဖြစ်​ ပါဝင်​ကူညီ​ပေးခဲ့တယ်​လို့သိရပါတယ်​။သူမ​ပေးခဲ့တဲ့ အမှတ်​ပုံ​လေး​တွေကို သူမရဲ့ပရိတ်​သတ်​​တွေ အတွက်​ပြန်​လည်​မျှ​ဝေ​ပေးခဲ့ပါ​သေးတယ်​။ Wunna’ Source,Aye Thaung